China YANMAR SERIES စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | နယူး Hongfu
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် 50Hz 400-230V အထွေထွေသတ်မှတ်ချက်များ
ပါဝါ အင်ဂျင်အမျိုးအစား CyL x ကိုဘွားမြင်လေ၏
Displ ။ လောင်စာဆီ cons ဆီ
စွမ်းရည် အသံတိတ်အမျိုးအစား Compact ဗားရှင်း
Dimension LxWxH အလေးချိန်
kW kVA kW kVA မီလီမီတာ Ltr ၇၅% 100% Ltr မီလီမီတာ ကီလိုဂရမ်
AJ10Y79 8 10 3TNV76-GGE376 × 82 ၁.၁၁၆ ၁.၅2၅.၅ 1580x810x930 359
AJ11Y 8 10911 3TNV82A-GGE382 × 84 ၁.၃၃၁ ၁.၈ ၂.၅ ၅.၅ 1580x810x930 359
AJ15Y 10 13 11 14 3TNV88-GGE388 × 90 ၁.၆၄၂ ၂.၃3၆.၇ 1580x810x930 359
AJ20Y 14 18 15 19 4TNV88-GGE488 × 90 ၂.၁၉3၄.၁ ၆.၇ 1580x810x930 359
AJ22Y 16 20 18 22 4TNV84T-GGE484 × 90 ၁.၉၉၅ ၃.၆ ၄.၇ ၆.၇ 1580x810x990 467
AJ42Y 28 35 31 39 4TNV98-GGE498 × 110 ၃.၃၁၉ ၅.၇ ၇.၆ ၁၀.၅ 1580x810x990 667
AJ45Y 32 40 35 44 4TNV98T-GGE498 × 110 ၃.၃၁၉7၉.၄ ၁၀.၅ 1580x810x1165 667
AJ55Y 40 50 44 55 4TNV106-GGE4106 × 125 ၄.၄၁၂ ၈.၄ ၁၁.၂ ၁၄.၀ 1595x810x1150 730
AJ70Y 50 63 55 69 4TNVT106-GGE4106 × 125 ၄.၄၁၂ ၉.၅ ၁၂.၇ ၁၄.၀ 1580x810x1165 780
Yanmar Co. , Ltd. (ヤンマー株式会社, Yanma Kabushiki-Gaisha) ဂျပန်ဖြစ်ပါတယ် ဒီဇယ်အင်ဂျင် ထုတ်လုပ်သူကို ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင်အိုဆာကာတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Yanmar သည်ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများ၊ အပျော်စီးလှေများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးစက်ကိရိယာများ၊ စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်မီးစက်တပ်ဆင်ခြင်းများအပါအ ၀ င်အင်ဂျင်အမျိုးမျိုးအသုံးပြုသောအင်ဂျင်များကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချသည်။ ဝေးလံခေါင်သီသောစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ကိရိယာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၊
ကုမ္ပဏီသည်ဒီဇယ်အင်ဂျင်များအထူးပြုလုပ်ထားပြီးပေါ့ပါးသောငါးဖမ်းလှေများ၊ သင်္ဘောများ၊ ထွန်စက်များ၊ ရိတ်သိမ်းစက်များ၊ ဆန်စက်စက်များ၊ ဓာတ်ငွေ့အပူစုပ်စက်များ၊ နှင်းများတိုက်ဖျက်သူများ၊ အကြီးစား Utility ကိုစက်ယန္တရား။ ၁၉၁၂ တွင်ကုမ္ပဏီစတင်သောအခါ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးလက်တွေ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်ငယ်တစ်ခုကိုမထုတ်လုပ်မီကဓာတ်ဆီသုံးအင်ဂျင်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Yanmar သည် J. League Division 1 ဘောလုံးအသင်း Cerezo Osaka ၏နာယကဖြစ်ပြီး AFC ချန်ပီယံလိဂ်၊ Yanmar Racing နှင့်ဂျပန်ရုပ်မြင်သံကြားမှရာသီဥတုခန့်မှန်းခြင်းအစီအစဉ်များအတွက်စပွန်ဆာပေးသည်။ သူတို့ကဂျာမန်ဘောလုံးအသင်း Borussia Dortmund ကိုစပွန်ဆာပေးပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစပွန်ဆာလည်းဖြစ်သည်
သီးခြားစီနွေ ဦး ဆလင်ဒါနှုန်း 1.4အဆို့ရှင်။ ရေ၊ အအေးဓာတ်ငွေ့တာဘို၊ လေဖြတ်လေးခု၊ လေအေးအမျိုးအစားအတွက်ဝင်ပေါက်ရေ၊ တိုက်ရိုက်လောင်စာဆီစနစ်များ။
၂။ အဆင့်မြင့်အီလက်ထရောနစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ပုံမှန်ထိန်းညှိမှုနှုန်းဖြင့်လောင်စာထိုးစနစ်ကို ၀ မှ ၅% (စဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်နှုန်း) အကြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဝေးထိန်းလည်ပတ်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုသိရှိနိုင်ပြီးအလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကိုလွယ်ကူစေသည်။ ရုတ်တရက်ဝန်တိုးမှုအောက်မှာလျင်မြန်စွာလည်ပတ်မြန်နှုန်း recover ။
၃။ အင်ဂျင်စားသုံးမှုပုံစံတွင်ရှိသောလျှပ်စစ်အပူပေးစက်သည်အပူချိန်နိမ့်ပြီးလျှင်မြန်သော / စိတ်ချရသောအင်ဂျင်ကိုစတင်သည်နှင့်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ပြည်နယ်အစိုးရမှသတ်မှတ်ထားသောထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများကိုရယူပါ။
၄။ လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့်အသုံးပြုထားပြီးလောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုပိုမိုမြင့်မားသည်။ နာရီပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်ကုန်လွန်စေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သည့်အဆင့်၊ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနိမ့်ကျခြင်း၊
နိမ့်ကျအပူချိန်မှာ 5. သာ။ ကောင်း၏စတင်စွမ်းဆောင်ရည်။
ရှေ့သို့ KUBOTA စီးရီး
နောက်တစ်ခု: DOOSAN စီးရီး
အသေးစားမီးစက်, Kubota အင်ဂျင်နှင့်အတူဒီဇယ်မီးစက်, 240kw မီးစက်, မီးစက်စျေးနှုန်းများ, တပတ်ရစ် Generator အရောင်း, ဒီဇယ်စက်စျေးနှုန်းများ,